Ogaden News Agency (ONA) – Safiirka Maraykanka Ee Qaramada Midoobay oo Iscasishay.
Safiirka Maraykanka Ee Qaramada Midoobay oo Iscasishay.
Posted by Wariye Qaran	/ October 10, 2018
Madaxweyne Donald Trump ayaa aqbalay istiqaaladda danjiraha Maraykanka ee Qaramada Midoobay Nikki Haley.
Waxaanu xafiiskiisa Oval Office ugu sheegay warfidiyeenka in ay xilka wareejin doonto dhamaadka sannadkan, ka dib “shaqo aad loogu bogay” oo ay qabatay.
Isaga oo ay la fadhido xafiiska haweenaydan ahaan jirtay badhasaabkii hore ee gobolka South Carolina ayuu madaxweynuhu sheegay in ay xil kale ka qaban karto xukuumadiisa oo waxa uu yidhi “xilkaad doonto dooro”.
Haley waxa xilka danjiraha Maraykanka ee Qaramada Midoobay loo ansixiyey bishii Jeeniweri ee 2017-kii.
Trump wuxu sheegay in Haley ay lix bilood ka hor u sheegtay in ay doonayso inay xilka muddo ka nasato.
Waxay warfidiyeenka u sheegtay in, inkasta oo la hadal hayey aanay iyadu qorshaysan in ay u tartanto madaxweynenimo sanadka 2020-ka, laakiin ay u ololayn doonto Trump oo hore u sheegay in uu mar labaad is sharraxi doono.
” Mahadsanid mudane Madaxweyne, sharaf aan noloshayda inta ka hadhay xasuusan doono ayay ii ahayd” ayey tidhi iyada oo garab taagan Trump.
“Haley si gaara ayay iigu dheerayd aniga, waxay qabatay shaqo aad loogu bogo waana qof fiican oo waxa intaa u dheer in ay tahay qof hawl kar ah.” ayuu yidhi madaxweynuhu
shaqadeeda Qaramada Midoobay mar uu ka hadlayna waxa uu yidhi ” waxay aad u fahamtay dalal badan oo Qaramada Midoobay saamayn ku leh, waxay fahamtay Shiinaha, India iyo qaar kaloo badan, waanay ka heleen oo weli way ixtiraamaan”
Waa tuma Nikki Haley?
Nikki Haley, magacii markay dhalatay loo bixiyey wuxu ahaa Nimrata Randhawa oo waxa dhalay waalidiin India ka haajiray, waxaana lagu koriyey diinta Siinge Siingaha markii ay degenaayeen magaalada Bamberg ee gobolka South Carolina, laakiin markii dambe ayay qaadatay diinta Masiixiyadda.
Shaqadii ugu horaysay ee ay qabatay markay 13 jirka ahayd waxay hayn jirtay dukaan ay qoyskoodu lahaayeen oo dharka lagu iibiyo.
2010-kii ayay noqotay badhasaabkii ugu horeeyey ee haweenay ka soo jeeda qoomiyadaha laga tirada badanyahay ah, isla markaana noqotay badhasaabkii ugu da’da yaraa Maraykanka. Waxa mar labaad loo doortay xilkaa sanadkii 2014-kii oo ay haysay xilkaa ilaa markii ay ku biiraysay xukuumadda Trump 2016-kii.
Haley waxa aad loogu bartay sidii ay uga falcelisay toogashadii dadka badan lagu laayeey ee ka dhacday Kaniisad dadka ku cibaadaysta ay u badanyihiin Maraykanka madow, markaas oo ay calan astaan u aha kooxaha xaj jirka ah ka dejisay dhismayaasha dawladda, dadkuna aad ugu amaaneen.
intii aanay noqon danjiraha Maraykanka, Haley khibrad badan oo siyaasadda arimaha dibadda ah may lahayn, inkasta oo markii ay badhasaabka ahayd ay mar wadaxaajood dhaqaalaha ah dibadda kaga qayb galshay
waxay kama dambaystii taageertay Trump, inkasta oo intii ololihii doorashadii madaxtooyada ee 2016-kii aanay isaga taageerin ee ay taageeraysay Marco Rubio.
Haley waa afo u dhaxday Kabtan ka tirsan ciidanka National Gaurd oo la yidhaa Micheal Haley, waxaanay leedahay laba caruura oo hadda uun qaan gaadhay.
Iscasilaadeeda waxa la shaaciyey iyadoo xilka meertada ah ee gudoomiyenimada Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay muddo bil ah haysay.
Bogga ay ku leedahay Twitter-ka ayey durba ka masaxday dhamaan wax kasta oo tilmaamayey xilkii ay haysay ee danjirenimada Qaramada Midoobay.